トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ny mizana sy ny tombontsoa lehibe indrindra tsary mahitsy-tsipika hamaly rafitra
Nisambo-bola, dia po dia ho voky amin'ny fomba efa voafaritra mialoha tamin'ny fotoana nindrana.
mahazatra no tena mahay mandanjalanja tsary sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly rafitra teo aminy.
izany, mpanjifa bola sy ny carte de cr?dit dia 'ny fomba izay dia ampiasaina koa ao, toy ny tombony sy ny fatiantoka toy izany no Will manontolo Inona no.
mifandray / no lehibe indrindra ny tahan'ny raikitra-mihodinkodina
Inona no mizana-tsary sy ny tombontsoa lehibe indrindra-tsipika mahitsy hamaly fomba?
mandanjalanja tsary tena sy ny fahalianana-tsipika mahitsy no hamaly fomba izay matetika antsoina hoe "mandanjalanja tsary mihodinkodina fomba".
tahaka ny maha samy hafa ny fomba hamaly ny hafa, ny hamaly ny nindrana vola ho an'ny tsy miova lasa endri-javatra.
Ankoatra izany, satria ny nindrana amin'ny rafitra mihodinkodina, ihany koa ny teboka mila averimberina nindramina tsy mihoatra ny fetra.
iray izay matetika hita ao amin'ny karatra fampindramam-bola, tao anatin'ny taona vitsivitsy mpanjifa bola izay nindrana ny fototra mampiasa fomba izany koa ny maro. Indray mandeha aho dia mampihatra ny
caching hilaza hoe fa fomba ny maso. Manokana ohatra ny
mandanjalanja tsary tena sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly rafitra
ohatra 200.000 Yen nindramina tamin'ny zanabola ny 14%, ny vola mba no havaly rehefa afaka iray volana dia toy izao manaraka izao.
(20 × 14% Man) × (30 ÷ 365 andro)
sakafo antoandro 4 servings, ka nandinika, ianao no milaza fa tsy tena be dia be ny vola.
hamaly karama isam-bolana dia hamaly vola raikitra dia miovaova arakaraka ny mizana. Raha naka ny fomba, toy ny fitomboana eo afovoany
dia, aoka isika hahatsiaro fa isaky ny repayments koa izy.
Soa in soa
mandanjalanja tsary tena sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly rafitra amin'ny mizana-tsary sy ny tombontsoa lehibe indrindra-tsipika mahitsy no hamaly fomba fa mora ny hanaovana drafitra ho an'ny isam-bolana hamaly vola.
Ary noho izany, dia tsy mety ihany koa ary misy kisendrasendra loatra izany nahy. Toy ny
velona irery, ny fitantanana ny vola manokana, na iza na iza no ho fomba hamaly ny tolo-kevitra.
Ankoatra izany, amin'ny alalan'ny mindrana orinasa, azo atao fa ho nampihena repayments.
Izao no fotoam-hamaly, raha latsaka ny tany am-boalohany ny tena, zavatra izay azo atao ny tolotra ao toy ny telefaonina na ny birao. Tampoka toy ny
hopitaly, na dia zava-mitranga no misy vintana fahoriana, dia lasa mora kokoa ny mety ihany koa ny tsy hamaly fa tsy azo tanterahana.
Ankoatra izany, raha misy vola no nitranga tampoka, dia lehibe tombony ho afaka mindrana ny fanampiny raha misy toerana ny vola nindramina. Ho an'ny ampiasaina amin'ny karatra
fampindramam-bola, ankoatra ny vita fanoloran-tena koa ATM, koa izany no ho hita avy amin'ny ATM ny toeram-pivarotana. Raha
ny isam-bolana repayments mandeha mafy, dia izay mora ny mametraka tsingerina izay hisambotra raha tsy rehefa ilaina dia mendrika.
tombon-dahiny amin'ny mizana-tsary sy ny tombontsoa lehibe indrindra-tsipika mahitsy hamaly rafitra < Ny tombon-dahiny in / H2>
mandanjalanja tsary tena sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly fomba, misy tranga izay indrindra ny hamaly lasa liana, dia azo voalaza izany. Rehefa
mbola hamaly ny kely indrindra ny vola izay omena isam-bolana, fa tsy hihavitsy dia tena vola fandoavam-bola, dia tsy manova ny enta-mavesatra eo amin'ny kitapom-batsy.
Vokatr'izany, dia ho notafihan'ny ny fiheverana fa misy ny fandaniana ny isam-bolana raikitra, lalana ianao mba handoavana ireo vola lasa lavitra.
Noho izany, raha tsy ampiasaina amin'ny fanampiana amin 'ny maso ny drafitra ao anatin'ny fohy ny fotoana, fa tsy izany any aoriana any, koa dia hamaly intsony mifarana mandrakizay.
Marina koa izany na inona na inona hamaly izany, fa raha tsy miverina rehefa afaka miverina, dia hitondra any amin'ny vokatra izay hampahory ny vozony tat? aoriana.
Ankoatra izany, ao amin'ny raharaha fanaovana ny nindrana teny an-dalana, mila hampitombo ny habetsaky ny vola tamin'ny andro hamaly, dia truism fa tsy misy intsony mihitsy mihena.
tamin'ny kevitra foana ny "hiverina", Miezaha hitondra ao an-tsaina ny fampiasana nomanina.
-tsary tena sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly fomba, noho ny habetsahan'ny vola na mahay mandanjalanja nindrana sonia ho an'ny nindrana, no tian'ny hafa repayments isam-bolana.
hamaly vola ny drafitra ihany koa mora ny hanangana, dia izy ihany koa fiadanan-tsaina na iza na iza te-hisambotra voalohany vola soa.
nanana loatra izany hanadino ny hamaly daty, fa ianao dia ho azo atao koa ny hampihenana ny fahadisoana.
Na izany aza ilaina kosa, raha tsy manao drafitra hamaly mafy, dia tsy maintsy ho voasambotra fikarakarana izay arahina fiainana miverina ihany no liana na dia mandrakizay. Toy ny vola ny fotoana
tratry ny ananany, miaraka manao vola, sy ny bera ao an-tsainy, mba hampihenana ny isan'ny fotoana na dia kely hamaly, hoy ny ho tsara fitaovana mora ampiasaina. Ny tombon-dahiny in
mizana-tsary tena sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly fomba, misy tranga izay indrindra ny hamaly lasa liana, dia azo voalaza izany. Rehefa
tratry ny ananany, miaraka manao vola, sy ny bera ao an-tsainy, mba hampihenana ny isan'ny fotoana na dia kely hamaly, hoy ny ho tsara fitaovana mora ampiasaina. Ny
-tsary tena mahay mandanjalanja sy ny fahalianana-tsipika mahitsy hamaly fomba, noho ny habetsahan'ny vola na mahay mandanjalanja nindrana sonia ho an'ny nindrana, dia hafa noho ny isam-bolana repayments.
tratry ny ananany, miaraka manao vola, sy ny bera ao an-tsainy, mba hampihenana ny isan'ny fotoana na dia kely hamaly, hoy ny ho tsara fitaovana mora ampiasaina.